सरकारले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने होइन ? मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याउ-सांसद बद्री पाण्डे – Online National Network
१५ भाद्र २०७६, आईतवार ०३:१५
काठमाडौं, १५ भदाै – राष्ट्रिसभामा मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर गराएको तर्कसहित त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। बिहीबार संसद्मा पेस भएको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा कांग्रेस सांसद बद्री पाण्डेले उक्त विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भएर जाने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको बताए।
‘दण्ड सजायबाट प्रजातन्त्र बलियो हुन सक्दैन, पत्रकारितालाई जति स्वतन्त्रता दिन्छौं, प्रजातन्त्र त्यति नै बलियो भएर जान्छ’, उनले भने। विधेयक समितिमा पुगेर संशोधन हुने आफूले विश्वास लिएको उनले बताए।
सरकारले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, स्वनियमभित्र, अनुशासनभित्र राख्नुपर्छ भन्दै त्यसभित्र रहेर विधेयक अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। ‘अरु फौजदारी कानुन मिसमास गरेर विधेयक ल्याउनुहुँदैन’, उनले भने, ‘पत्रकारको जुन स्वतन्त्र जिम्मेवारी छ, त्यसबमोजिम चल्न दिऔं’, उनले भने।
नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई मिडिया काउन्सिललाई कसरी स्वायत्त, स्वतन्त्र र शक्तिशाली संगठनका रुपमा अघि ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल हुने बताए। उनले भने, ‘विधेयकमा संशोधन गर्ने चिजलाई संशोधन गर्नेछौं, स्पष्ट गर्ने कुरामा स्पष्ट गर्छौं।’
उनले स्वेच्छाचारिता र अराजकता नियमन गर्ने कुरामा पत्रकार महासंघले सहमति दिएको बताए। उनले विधेयकमा संशोधन गर्ने विषयमा जे समझदारी भएको छ त्यसबमोजिम जान सकिने उनले बताए। नेकपाका सांसद कालिबहादुर मल्लले आवश्यकताबिनाको स्वतन्त्रता अराजकतातर्फ जान्छ भन्दै मिडिया क्षेत्रको परिचालन राष्ट्रिय आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने बताए।
‘तानाशाही व्यवस्थामा नबोल्नेले अहिले गणतन्त्र आफूले ल्याएको जस्तो गरी वक्तव्यबाजी गर्दै हिँडे। यसलाई नियन्त्रण गरिनेछ।’
गोकुल बास्कोटा, सञ्चारमन्त्री
सांसद डा. विमला राई पौड्यालले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनमा मिडियाको महŒवपूर्ण भूमिका हुने भन्दै पछिल्लो समयमा विकृति बोकेर आउने मिडियाहरू धेरै नै भएको बताइन्। उनले अब हामी विकासको बाटोबाट जानुपर्ने भएका कारण पत्रकार जगत् स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्। मर्यादित पत्रकारिता हुनुपर्ने र विकृतिलाई दण्डसजाय हुनुपर्ने उनले बताइन्। उनले सरकार पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताइन्। – नागरिक